Humaaans mamela anao hamorona sary vongana olona | Famoronana an-tserasera
Raha tsy hainao akory ny manoritra ny o miaraka amina iraisana aza manahy. Humaaans dia rindrambaiko vaovao izay ahafahanao mampiseho izay rehetra fahalalana momba ny famolavolana sary amin'ny alàlan'ny vector.
Hevitra tsara hamoronana ireo sary ireo izay ilainao modely maro hamoronana sary tonga lafatra ho an'ny karatra krismasy na karazana tanjona hafa. ny fampiharana Internet izay tsy azonao adino hatramin'ny andro anio.
Ary ny marina fa tsy mora ny mamorona endrika olombelona anao manokana izay tsy maintsy ataonao ary apetraho amin'ny karazana toerana rehetra hamoronana seho mahaliana. Mba hanomezana vahaolana ho an'ny mpamorona maro izay tsy manana an'io toerana io hanoritana ny sarin'olombelona, ​​Humaaans, nosoratan'i Pablo Stanley, dia tonga teo amin'ny sisin'ny efijery amin'ny solo-sainao.
Stanley dia mpamorona ao amin'ny Invision ary izy no namorona ity fitaovana ity izay isika mamela anao hamorona sary vongana haingana mitranga tanteraka fa manana fahaizana kanto isika. Ary ny tsara indrindra: maimaim-poana tanteraka izany.
Ao amin'ny Humaaans dia tena miatrika tranomboky Invision Studio izay natao izahay afaka manambatra ny karazana sary sy sary mihetsika isika an'ny olona. Ary io mpamorona io dia nahavita namolavola karazana vatana maro karazana tamin'ny karazana posipsy maro karazana amin'ny fomba amam-bolo, fiaviana ary akanjo ho an'ireo maodely.
Ny zavatra rehetra dia azo refesina ary apetraka araka ny tiantsika hamorona izany seho izany dia mila asehontsika ho an'ny mpampiasa na mpitsidika ny tranokalanay na ny rindranasa izay heverinay ho zava-dehibe raha ny amin'ny fanangonana olona maro. Tsy inona izany fa ny ohatra iray amin'ny hoe afaka manao an'ity tranonkala ity izay anananao avy amin'ity rohy ity ho an'ny atiny rehetra ary Ity hafa ho fianarana afaka ampiasana azy.
Na dia mampahatsiahy anao an'izany aza izahay araraoty ny tombony azo ilainao dia tokony ho mpampiasa InVision ianao. Avelanay miaraka amin'ny endrika hafahafa Korehiko Hino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Mamorona sary vonganao miaraka amin'i Humaaans nefa tsy manana hevitra momba ny sary